Aromatherapy: yintoni, zizibonelelo nokunye okuninzi | Amadoda aQinisekileyo
Wakhe weva ngearomatherapy? Ngokuqinisekileyo ewe, kuba imalunga iyeza elinomdla kwiindlela ezahlukeneyo zeengxakiIngakumbi ukuba ukhetha ukuzama ukuzilungisa ngeendlela zendalo ngaphambi kokuzama amayeza.
Kodwa Yintoni iaromatherapy eyaziwayo kwaye inokukunceda njani kanye kanye? Apha siphendula le mibuzo kunye neminye malunga nesi sihloko.
1 Yintoni iaromatherapy?
2 Izibonelelo zearomatherapy
2.1 Ukutya okuchasene noxinzelelo
3 Kutheni ikwenza uzive wonwabile?
4 Ngaba iaromatherapy ikhuselekile?
Njengoko igama layo libonisa, aromatherapy luhlobo lonyango okanye unyango olusekwe kwiaroma. Abantu abagqiba ekubeni benze olu nyango kufuneka badibane nezicatshulwa zezityalo ezaziwa njenge Akukho mveliso ifunyenweyo. Ezi mveliso zingena ngeebhotile ezincinci (umbono wokuqala kukuba uza kancinci kakhulu ngexabiso abanalo), kodwa kufanele ukuba kuqatshelwe ukuba, ngenxa yokuxinana kwayo okuphezulu, isixa esincinci kakhulu sihlala sanele, esenza ukuba sihlale ixesha elide.
Kwelinye icala, kufuneka ulumke xa ukhetha iioyile ezifanelekileyo kuba, njengoko kuhlala kunjalo, konke oko kukhazimla ayiyigolide. Ezinye iimveliso zixuba iioyile ezifanelekileyo kunye nezinye izinto. Ngokutsho kweengcali, kubalulekile ukuba inkqubo yenziwa ngendlela ethile yokuqinisekisa ukuba iipropathi zesityalo azilahleki. Ukuba uthatha isigqibo sokuzama, kungcono ukuba uthembe i-aromatherapists okanye ubuncinci uye kwiivenkile ezijolise kwiimveliso zendalo, apho uya kuba nethuba lokucela iingcebiso xa kukho imfuneko.
Kwezinye iimeko, i-aromatherapy inokuba nezibonelelo zempilo, kodwa kubaluleke kakhulu, njengakuqala xa kufikwa kunyango olulolunye, ungayisebenzisi endaweni yonyango. Ukuba ucinga ukuba iaromatherapy ingasombulula ingxaki yakho ngcono kunonyango, qhagamshelana nodokotela wakho kuqala. Uya kukuxelela ukuba ngawaphi amanyathelo oza kuwathatha.
I-Aromatherapy iye yaphandwa kwaye yenziwa kangangexesha elithile, ke amathuba okuba sele uyazi ukuba inxulunyaniswa nezibonelelo ezithile zempilo kwaye usenokuba ukhe weva ngabantu obaziyo malunga nezinye zazo. Ukuba unengxaki yoxinzelelo kwaye ufuna ukuyinciphisa ngaphambi kokuba imeko iphume kulawulo, iyeza lendalo elisichaphazelayo kwesi sihlandlo linokukunceda, kuba Abantu abaninzi bathi ibonelele ngeziphumo ezilungileyo kakhulu zokuphelisa uxinzelelo kunye nokuphucula yabo umgangatho wokulala.
Ngale ndlela, iaromatherapy inokukunceda:
Nciphisa uxinzelelo, uxinzelelo kunye noxinzelelo
Fikelela kwimeko yokuzola kunye nokuphumla
Lala ngcono ebusuku
Nciphisa ezinye iintlungu
Thintela kwaye ulwe nosulelo lolusu (kuphela xa kusetyenziswa iioyile ezifanelekileyo kulusu)
Ukutya okuchasene noxinzelelo
Jonga eli nqaku: Ukutya koxinzelelo. Apho uyakufumana iindlela ezininzi zokutya, zonke zisempilweni, ezinokukunceda ugcine le ngxaki ixhaphake kakhulu kuluntu lwanamhlanje phantsi kolawulo.
Kutheni ikwenza uzive wonwabile?
I-Aromatherapy inokuvelisa imvakalelo yentlalontle kuba, kuyabonakala ukuba, ukusezela iioyile eziyimfuneko ayisiyolonwabo nje kuphela, kodwa Ngempumlo kubangela uhlobo lwempendulo yeetyathanga edlula kwingqondo. Inxalenye elungileyo yezibonelelo zayo iya kudibana neziphumo zayo kwingqondo, apho inokunceda ukwenza indawo ezithile eziphambili, ezinoxanduva lwemisebenzi enje ngeemvakalelo okanye imveliso ye-serotonin (i-neurotransmitter elawula imood kunye nokulala, phakathi kwezinye izinto).
Unokuba nebhotile yelamuni, i-chamomile, i-lavender, umsedare, i-bergamot okanye ezinye iioyile ezifanelekileyo ekhaya nasemva kokufunda iziphumo zazo ezintle ukhuthazwe ukuba uzame i-aromatherapy encinci. Ngoku kuphakama umbuzo: Kufuneka uqhagamshelane njani neeoyile ezifanelekileyo ukuze ukonwabele izibonelelo zolu nyango? Ewe, kwiaromatherapy, iioyile ezifanelekileyo zinokuphefumlelwa kwaye zisetyenziswe kulusu ngoncedo lwe-massage okanye ibhafu. Kunqabile ukuba banxile.
Ifakwe kulusu, iioyile ezifanelekileyo azilungelanga ingqondo kuphela, kodwa zilungele nomzimba. Banokunceda ukunciphisa iingxaki ezahlukeneyo ezinxulumene nolusu ngenxa yeempawu zabo zokulwa neentsholongwane. Ezinye iingcali zide zibacebise ngeentlungu ezidibeneyo.
Ngaba iaromatherapy ikhuselekile?
Unyango olusekwe kwioyile eyimfuneko lukhuselekile, kodwa ngamanye amaxesha lunokubangela ukusabela okungalunganga, ikakhulu ukucaphuka kwamehlo, ulusu kunye neembonakalo zencindi. Kufuneka kuqatshelwe ukuba Akufanele baphinde banxile ngaphandle kokuba uchwephesha oqinisekisiweyo ukuxelela.Ukusukela ngomlomo, iioyile ezifanelekileyo zinokuba yingozi emzimbeni wakho, ngakumbi ukonakalisa izintso kunye nesibindi.
Ngokubhekisele ekusebenzeni kwayo, inyani kukuba impendulo iyahluka ngokuxhomekeka ekubeni ubuza kubani. Kukho abantu abathi baziva bebulela ngcono kwiaromatherapy, ngelixa abanye besithi abaluboni naluphi na utshintsho. Ke ukuba iyabamba iliso lakho, ngumcimbi wokuzama ngokwakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Kufanelekile » Aromatherapy